ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: World Water Day 2010!!!
World Water Day 2010!!!
မြန်မာကလေးငယ် တသိန်းနီးပါးဟာ ရေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ရေမသန့်လို့ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် နှစ်စဉ် သေဆုံးနေရတယ်လို့ကုလသမဂက သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။ ကမာပေါ်မှာ ၁၅စက်ကန့် တိုင်းမှာ ကလေးငယ်တယောက်နှုံး ရေကောင်းရေသန့် မရတဲ့ အတွက် သေဆုံး နေရပါတယ်။ ရေထဲကို အညစ်အကြေး ပစ်တော့မယ် ကြံတိုင်း အနာဂတ်ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေကို ဘယ်လိုအမွေ ထားရစ်ခဲ့မလဲ ဆိုတာ သတိရပေးကြပါစို့။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 4:50 AM